प्रीतिका छ लक्षण के के हुन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन « Harekpal
प्रीतिका छ लक्षण के के हुन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन
ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति ।
भुङ्ते भोजयते चैव, षड्विध प्रीतिलक्षणम् ।। –पञ्चतन्त्र, ४।१०
कुनै कुरा दिनु, लिनु, गुह्य कुरा भन्नु, सोध्नु, दिएको खानु र आफूले पनि खुवाउनु प्रीतिका छ लक्षण हुन् ।
विष्णुशर्माले प्रेमका छ लक्षणको सूक्ष्म चिरफार गरेका छन् । जसले प्रेम गर्छ उसले आफ्ना कुरा दिन्छ र प्रेमीले दिएका कुरा पनि लिन्छ । यो प्रेमको पहिलो लक्षण हो । अर्थात् उपहार आदान प्रदान प्रेमका पहिला दुई लक्षण हुन् भनी बताइएको छ । प्रेम प्रेमीबीच एकोहोरो लिने मात्र हुन्छ भने त्यो प्रेममा खोट रहन सक्छ । किनकि प्रेमको पहिलो शर्त भनेकै उपहारको आदान प्रदान हो ।
यसैगरी प्रेमको अर्को लक्षण मनका कुरा बताउनु हो । एक आपसमा मनका कुरा साटासाट भएन भने प्रेम मौलाउन सक्दैन् । एकोहोरो आफ्नो मात्र बखान गर्ने व्यक्तिले प्रेममा सफलता हात पार्न पनि सक्दैन । मनका भावना एक आपसमा साटासाट भए भने त्यहाँ प्रेमको फूल फुल्न थाल्छ भन्ने नीतिकारको भनाई रहेको छ । अर्थात् गुह्य कुराको आदान प्रदान प्रेमका अर्का दुई लक्षण हुन् ।
यसैगरी प्रेमका अर्का दुई लक्षणमा खानु र खुवाउनु पर्दछन् । एउटाले मात्र खर्च गरेर खाने अर्काले खर्चै नगर्ने वा नखुवाउने भयो भने पनि प्रेम प्रष्टिन सक्दैन । दुवैले बराबर खाने र खुवााउने कार्य गरे भने मात्र प्रेम असली हुन सक्छ । एउटाले खाने मात्र अर्काले खुवाउने मात्र भयो भने पनि प्रेम हुन नसक्ने भएकाले प्रेमको असली राज थाह पाउन लेन देन, गोप्यकुराको आदान प्रदान अनि एक आपसमा खानपान हुनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा प्रेम सफल भएको मान्न सकिदैन भन्ने नीति वचन मननीय छ । – नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद् –